Yangu iPhone Kamera Yakadzima! Heino Chikonzero & Chaicho Kugadzirisa. - Iphone
sei kudzima sync mifananidzo kubva iphone
iphone bluetooth haigoni kuwana zvigadzirwa
hope ndaive nepamuviri pemapatya
iphone skrini isina chinhu asi ichiripo
Yangu iPhone Kamera Yakadzima! Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa.
Yako iPhone kamera app haina kujeka uye hauna chokwadi nei. Iwe unovhura iyo yeKamera app kuti utore pikicha, asi hapana chinotaridzika zvakajeka. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura zvaunofanira kuita kana yako iPhone kamera isina kujeka !
Pukuta Off Camera Lens
Chinhu chekutanga kuita kana yako iPhone kamera isina kujeka ndeyekungodzima lens. Kazhinji yenguva, kune smudge pane lens uye izvo zviri kukonzera dambudziko.
lavender inodzosera mibhedha
Bata microfiber mucheka uye bvisa yako iPhone kamera lens. Usaedze kupukuta lens neminwe yako, nekuti izvo zvinogona kungoita kuti zvinhu zviwedzere!
Kana iwe usati uine muridzi we microfiber, tinokurudzira izvi zvakanyanya matanhatu-pack akatengeswa naProgo paAmazon. Iwe unozowana matanhatu akanakisa microfibers machira asingasviki $ 5. Imwe yemhuri yese!
Bvisa Yako iPhone Nyaya
iPhone kesi dzimwe nguva dzinodzivirira iyo lensera yekamera, ichiita kuti ako mapikicha aite serima uye asina kujeka Bvisa yako iPhone kesi, wozoedza kutora pikicha zvakare. Paunenge uri pazviri, cheki-cheka kuti uone kuti nyaya yako haisi pamusoro!
Vhura Uye Vhurazve Camera App
Kana yako iPhone kamera ichiri kujeka, inguva yekukurukura nezve mukana wepurogiramu yesoftware. Iyo yeKamera app yakangofanana nechero imwe app - inogona kubatwa nesoftware. Kana iyo app ikapunzika, kamera inogona kuoneka yakasviba kana kusviba zvachose.
Kuvhara uye kuvhurazve iyo app yeKamera dzimwe nguva zvakakwana kugadzirisa dambudziko. Kutanga, vhura iyo switcher yeapp pa iPhone yako nekudzvanya kaviri bhatani reKumba (iPhone 8 uye kumberi) kana kusvetuka uchikwira kubva pasi uchienda pakati pekona (iPhone X).
Pakupedzisira, swipe iyo app yeKamera kubva pamusoro pechidzitiro kuti uvhare mairi. Iwe uchaziva kuti iyo yeKamera app yakavharwa kana isisacharatidzike muapp switch. Edza kuvhura iyo Kamera app kudzosera kumusoro kuti uone kana dambudziko rekutsvaira rakagadziriswa!
Kana kuvhara Anwendung haana kugadzirisa dambudziko, edza restarting iPhone wako. Zvinogoneka kuti yako iPhone kamera haina kujeka nekuti imwe app yakarovera, kana nekuti yako iPhone iri kusangana neimwe mhando diki software glitch.
Kana iwe uine iyo iPhone 8 kana yekare modhi iPhone, tinya uye ubatise bhatani remagetsi kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' ichioneka pachiratidziro. Kana iwe uine iPhone X, tinya uye ubatise bhatani repadivi uye chero vhoriyamu bhatani kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' yaonekwa.
Kana kutangazve yako iPhone isina kushanda, nhanho yedu inotevera kuisa yako iPhone muDFU modhi. Kana dambudziko re software richiita kuti yako kamera kamera isabudirire, DFU kudzorera ichaigadzirisa. 'F' muDFU kudzorera inomiririra firmware , iyo purogiramu pane yako iPhone iyo inodzora yayo Hardware - seye kamera.
Usati wapinda muDFU modhi, ita shuwa yekuchengetedza backup yemashoko pane yako iPhone. Paunenge wagadzirira, tarisa yedu imwe chinyorwa kuti udzidze maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi uye udzore !
Tora Iyo Kamera Yakagadziriswa
Kana yako iPhone kamera iri zvakadaro kusviba mushure meDFU Kudzorera, iwe ungatofanira kuti kamera igadziriswe. Chimwe chinhu chingangonamirwa mukati me lens, senge tsvina, mvura, kana zvimwe marara.
Ronga musangano kuApple Chitoro chako uye uve neGenius tarisa icho. Kana yako iPhone isina kuvharwa neAppleCare +, kana kana uchida kuedza kuchengetedza imwe mari, tinokurudzira Pulse . Puls ndeyeye-inoda kambani yekumashure iyo inotumira vetted tekinoroji zvakananga kwauri uyo achagadzirisa yako iPhone pa-iyo-iyo nzvimbo!
Simudzira Yako iPhone
IPhones dzekare hadzina kuvakwa kubata yakawanda zoom yekamera. Yese iPhone pamberi peiyo iPhone 7 inovimba nayo zoom yedhijitari pane ku zoom zoom . Zoom yedhijitari inoshandisa software kusimudzira pikicha uye inogona kuve yakajeka, nepo zoom zoom inoshandisa yako kamera kamera uye yakajeka.
nei iphone yangu isinga tsigire
Sezvo tekinoroji yafambira mberi, maPhones matsva ave nani zvakanyanya pakutora mafoto uchishandisa zoom zoom. Tarisa uone iyo nhare yekuenzanisa nhare pane UpPhone kuwana iPhones ine yakanakisa zoom zoom. Iyo iPhone 11 Pro uye 11 Pro Max ese ari maviri anotsigira 4x Optical zoom!
Ndiri Kuona Zvakajeka Izvozvi!
Yako iPhone kamera yakagadziriswa uye iwe unogona kuenderera kutora mifananidzo inoshamisa! Ndinovimba muchagovana ichi chinyorwa pasocial media nemumwe munhu waunoziva angade kudzidza zvekuita kana yavo iPhone kamera isina kujeka. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo iwe yaungade kubvunza, siya mhinduro pasi pazasi!